उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच उच्चस्तरीय वार्ता - Naya Patrika
उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच उच्चस्तरीय वार्ता
एजेन्सी सिउल, २६ पुस | पुष २६, २०७४
उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच पहिलोपटक उच्चस्तरीय वार्ता भएको छ । दुई वर्षपछि पहिलोपटक मंगलबार दुई देशका प्रतिनिधिबीच उच्चस्तरीय वार्ता भएको हो । वार्तामा आगामी हिउँदे ओलम्पिकमा उत्तर कोरियाको सहभागिता, दुई कोरियाली परिवारको पुनर्मिलन, उत्तर कोरियाको आणविक गतिविधिलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो । कोरियाली सीमामा देखिएको तनाब अन्त्य गर्न सैन्य तहमा छलफल गर्न दुबै देशले सहमति जनाएका छन् । दुई वर्षअघिदेखि रोकिएको सैन्य हटलाइन बुधबारदेखि सुचारु हुने भएको दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
कहाँ भयो वार्ता ?
विश्व समुदायले नै निकै चासोका साथ हेरेको सो वार्ता दुई देशको सीमावर्ती गाउँ पानमुनजोममा भएको थियो । गैरसैनिक सो क्षेत्रलाई शान्ति गाउँसमेत भनिन्छ । वार्तामा दुवै देशका पाँच–पाँचजना वरिष्ठ अधिकारीको सहभागिता थियो । वार्ता प्रक्रियालाई दुवै देशका नेताले सिसिटिभीबाट अवलोकन गरेका थिए ।
नाटकीय परिवर्तन ?
पछिल्ला सातामा दुई कोरियाबीचको सम्बन्धमा नाटकीय सुधार आएको छ । झन्डै दुई साताअघिसम्म उत्तर कोरियाले आणविक धम्कीलाई निरन्तरता दिएको थियो । तर, मंगलबार बिहान भने दुई कोरियालाई छुट्याउने सीमारेखाबाट प्योङयाङको एउटा प्रतिनिधिमण्डल दक्षिण कोरिया प्रवेश गरी दक्षिणसँग वार्तामा बसेको छ ।
दुई कोरियाबीचको सम्बन्धमा अनौठो परिवर्तन देखिए पनि प्योङयाङले दक्षिण कोरियालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आधारभूत परिवर्तन आइनसकेको केही विज्ञले अनुमान गरेका छन् । अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि कुनै पनि वेला आणविक हमला गर्न सक्ने त्रासमा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले दक्षिणसँगको सम्बन्ध बढाएको केही विज्ञको अनुमान छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका स्वागत
उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच भएको उच्चस्तरीय वार्ताको संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विश्व समुदायले स्वागत गरेको छ । पछिल्लो समयमा यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही सुधार आएको भन्दै राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजले प्रशन्नता व्यक्त गरेका छन् । दुई कोरियाबीच आगामी दिनमा पनि सौहार्दतापूर्ण वातावरण बन्ने उनको विश्वास छ । वार्ताको अमेरिका, रसिया र चीनले यसअघि नै स्वागत गरेका थिए ।
वार्तामा के भयो ?
‘वार्तामा हिउँदे ओलम्पिकमा उत्तरको सहभागिता, कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापना र दुई कोरियाली परिवारको पुनर्मिलनबारे गम्भीर छलफल भयो,’ वार्तापछि दक्षिण कोरियाको एकता मन्त्रालयका उपमन्त्री चुआन हेईले भने ।
दक्षिण कोरियामा आयोजना हुने हिउँदे ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा दुवै देशका खेलाडीले संयुक्त मार्चपास गर्ने सहमति भएको छ । सन् २००६ मा पनि दुवै देशले संयुक्त मार्चपास गरेका थिए ।
दक्षिण कोरियाले फेब्रुअरीको मध्यतिर पर्ने कोरियाली नयाँ वर्षमा दुई कोरियाली परिवारको पुनर्मिलन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कोरियाली युद्धपछि एउटै परिवारका सदस्यहरू अझै पनि दुई देशमा बस्न बाध्य छन् । परिवार पुनर्मिलन दुवै देशका लागि साझा भावनात्मक विषय रहेको दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् ।
दक्षिण कोरियाले सैन्य विवाद र उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता सुचारु गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ । ओलम्पिक खेलमा उत्तर कोरियाको सहभागितालाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको संयोजनमा उत्तरमाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्धलाई अस्थायी रूपमा फुकुवा गर्ने दक्षिणले प्रस्ताव गरेको छ ।
दक्षिण कोरियाले गरेको प्रस्तावप्रति उत्तर कोरिया सकारात्मक रहेको जनाइएको छ । वार्ताको सुरुमा उत्तर कोरियाली वार्ता टोलीका प्रमुख रि सोङ गोनले तटस्थ अभिव्यक्ति राखेका थिए । उत्तर कोरिया वार्ताप्रति गम्भीर रहेको बताउँदै गोनले नयाँ वर्षले दुवै देशलाई ‘उपयुक्त उपहार’ दिने बताएका थिए ।